ပါတီပွဲပြီးနောက်သူမအရက်အဆိပ်သင့်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ယခုသူသည်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းသေဆုံးမှုကိုရပ်တန့်ရန်တိုက်ခိုက်နေသည် - နှုန်းထားများ
Christian Ciammetti သည်ပါတီပွဲပြီးနောက်သူ့အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးထိုင်ခုံပေါ်သို့ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်နေပြီးသူ၏အခန်းဖော်များကသူ့ကိုအိပ်ရာဝင်စေပြီးညလုံးလုံးသူအားစစ်ဆေးသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကသူ၏ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ခရစ်ယာန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ပါ။
သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူ Mary Ciammetti သည်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအခြားကောလိပ်ကျောင်းသားများအား၎င်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကြားရန်မှာသူမအတွက်တာဝန်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတစ်ပတ်ကြာဘဝအထောက်အပံ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကသမ္မာကျမ်းစာကိုကျပန်းဖွင့်ခြင်း၊ ငါဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငါဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခြင်းပဲ။ အံ့ ously စရာကောင်းတာကကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲကကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုကအမြဲတမ်းရှိခဲ့တာကြောင့်နှလုံးကြေကွဲခြင်းကိုသက်သာစေခဲ့တယ်။
“ ငါတို့သားမပါဘဲနောက်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ရက်မှတစ်ဆင့်ဆုတောင်းရန်နှင့်မကြာခဏအကူအညီတောင်းရန်နှင့်ကျေးဇူးပြုရန်အော်ဟစ်ရန်ပြုခြင်း” သည်တကယ့်ကိုဆိုးရွားလှသည်။ နေ့တိုင်းဘုရားသခင်က 'မင်းငါ့ကိုနေစေချင်တဲ့နေရာကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်ပါ။ ငါသွားရမယ့်လမ်းကိုငါလိုက်မယ် 'ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါပြု။ ငါနေဆဲဖြစ်၏။ ''
သို့သော်သူမအနေဖြင့်သူထင်ထားသည့်အတိုင်းထက်ပိုမိုသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုအားပေးရန်နှင့်ခြားနားအောင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာသူမသားသေဆုံးပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပဲသူမဖန်တီးခဲ့သည် မရပ်တန့်ပါနှင့်ရုံမခေါ်ပါ
Do Not Stall မှ Mary Ciammetti, Temple's Ambler ကျောင်းဝင်းရှိ 5K / 1 မိုင်လမ်းလျှောက်ရုံသို့သာခေါ်ဆိုပါ
“ အရက်အဆိပ်သင့်မှုကြောင့်သေဆုံးနှုန်းအများဆုံးသေဆုံးနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုဟာကောလိပ်ကလေးတွေမဟုတ်ဘဲလူလတ်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသားတွေပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ နှစ်နာရီကြာလျှင်နှစ်နာရီမှမိန်းမ၊ အထီးအတွက်သောက်ခြင်းသည်အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ငါတို့အားလုံးသည်လက်ခံထားသောယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းများ၊ ဦး နှောက်၊ အသည်း၊ ပညာရှင်များ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်မှမအောင်နိုင်ဘူး မည်သူမဆိုသေနိုင်သည်၊
လူတွေကိုညနေခင်းတွေစီစဉ်ဖို့၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနေဖို့၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို 'အိပ်ပျော်သွားအောင်' မထားဖို့လည်းအကြံပေးတယ်။
သင်၏သူငယ်ချင်းအားအိပ်စက်အနားယူစေခြင်းသည်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်သူမှမအောင်နိုင်ဘူး၊ ငါ့သားရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ '
မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်ခြင်းသည်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ပြasနာတစ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ရန်ငြင်းဆန်သောအရာဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်လူငယ်များသည်အသက်မပြည့်သေးသည့်သောက်သုံးခြင်းအတွက်အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားဆေးကုသမှုခံယူရန်သတိထားကြသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘ ၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းများတွင်ရေးသားထားသောအရာများထက် ပို၍ အဖိုးတန်ကြောင်းကိုမေ့သွားသည်။
'မရပ်တန့်ပါနှင့်၊ ဖုန်းခေါ်ပါ' ဆိုတာဘာလဲ။
မာရိ Ciammetti ဖန်တီးခဲ့သည် မရပ်တန့်ပါနှင့်ရုံမခေါ်ပါ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်များအကြောင်းလူငယ်များနှင့်သူတို့၏မိဘများအားပညာပေးရန်။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်အခြားသူများအားထိမိလဲစေခြင်း၊ ထိ မိ၍ လဲခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းမှအအေးခံခြင်း၊
သူကဤသို့ရှင်းပြသည် - 'အရက်မူးပြီးတုံ့ပြန်မှုမရှိသူကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ပါနှင့်။ အရေးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တောင်းဆိုခြင်းမပြုရန်ရှောင်ကြဉ်ရန်သူတို့ဘက်၌ထားပါ။ '
ဒီကင်ပိန်းကိုဖန်တီးသူ Mary Ciammeti နှင့်သားဖြစ်သူအမေသည်အရက်အဆိပ်ကြောင့်သေဆုံးသည်
ကျောင်းသားကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မူဘောင်တွင် Temple တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအားခေါ်ဆိုရန်အပြင်းအထန်အားပေးသည် ကျောင်းပရဝုဏ်ဘေးကင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ သူတို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်အန္တရာယ်ရှိနေသောအခြားသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများအတွက်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူရန်ကျောင်းသားအားမည်သည့်ကျောင်းသားသည်ကျောင်းသားကျင့်ထုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ချိုးဖောက်မှုများအတွက်တက္ကသိုလ်၏စည်းကမ်းကိုလိုက်နာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းပစ္စယပျက်စီးခြင်း၊ အခြားပစ္စည်းများရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့အပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်သည်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Stephanie Ives, တွဲဘက်ဒုဥက္ကPresident္ဌနှင့်ကျောင်းသားများ၏မဟာဌာနမှူး, ဘုရားကျောင်းကျောင်းသားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုတောင်းဆိုသောအခါတွန့်ဆုတ်မနေသင့်။
“ ကောလိပ်ကျောင်းအတော်များများဟာကျောင်းသားတွေကိုဆေးကုသမှုခံယူဖို့အကူအညီပေးတဲ့အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ ရှင်းနေသည်မှာဆေးပညာဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျောင်းသားများသည်စည်းကမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အတားအဆီးကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးကြောင့်သို့မဟုတ်သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုလားခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ အကူအညီလိုတယ်လို့ကျောင်းသားတစ် ဦး ခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဗီဇကိုသူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ ပြintoနာတွေကြုံရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူတို့ကတားဆီးမခံရဘူး။ ”
တစ်စုံတစ် ဦး ကအရက်အဆိပ်သင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
အရ သတိထားသောက်ပါ , တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အရက်အဆိပ်သင့်ကြောင်းပြသပါကလုပ်သင့်သောအရာငါးခုမှာ -
၃။ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါက၎င်းတို့အနားတွင်သူတို့အနားတွင်အိပ်။ သူတို့ပုံမှန်အသက်ရှူနေကြောင်းစစ်ဆေးပါ
5. သူတို့နှင့်အတူ နေ၍ သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးပါ
6. အကယ်၍ သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိပါကကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိပါကလူနာတင်ယာဉ်သို့မဟုတ်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အတွက် 911 ကိုခေါ်ဆိုပါ။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ ညှိနှိုင်းမှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်နှေးကွေးသောအသက်ရှူခြင်း (တစ်မိနစ်ရှစ်ကြိမ်လျော့ကျသော)၊ အပြာရောင်သို့မဟုတ်ဖြူဖပ်ဖြူရောအရေပြား၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နိမ့် (hypothermia)၊
သင်သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းသည်အရက်အဆိပ်သင့်ခြင်းလက္ခဏာကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါက ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ဆိုပါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် သို့မဟုတ် 911 ကိုခေါ်ဆိုပါ။